बि’रामी भेट्न जाँदा प्या’केटको फ्रु’ट जुस झु’किएर पनि नलानुहोस् , स्वा’स्थ्यका लागि कति हानि’कारक ?
स्वास्थ्य बि’रामी भेट्न जाँदा प्या’केटको फ्रु’ट जुस झु’किएर पनि नलानुहोस् , स्वा’स्थ्यका लागि कति हानि’कारक ?
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: अहिले हामीलाई स्व’स्थ्य, तन्दु’रुस्त हुनुछ । यसका लागि फलफूल खानुपर्छ भन्ने चेत पनि छ । फलफूल भन्दा त्यसको जुस छिटो र मिठो लाग्छ ।
त्यसो त बजारमा जु’स पाइन्छ, तयारी अवस्थाकै । थरी’थरीका फ्ले’बर, थरीथरी ब्रा’न्डको जुस बजारमा उपलब्ध छ । यस्ता फ्रु’ट जुसले स्वा’स्थ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ, स्वा’दिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
हामी बे’पर्वाह खाइदिन्छौं । बुढापाका, रो’गी, बालबच्चालाई दिने सर्वो’त्तम पे’य पनि यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । तर, तयारी अव’स्थामा आउने यस्ता प्या’केट बन्द फ्रु’ट जुस कति स्व’स्थ्यकर होला ? यसले श’रीरलाई ला’भ पुर्‍याउँछ कि हा’नी ? सोच्नुपर्ने कुरा हो यो । तयारी जुस कति स्व’स्थ्यकर ?
सामान्यतया, प्याक गरिएको जुसमा फा’इबरको मात्रा कम र फ्रु’क्टोसको मात्रा धेरै हुन्छ, जसले र’गतमा व्ल’ड शु’गरको मात्रा बढाउने गर्छ । त्यसैले, ताजा फलफूलको तुलनामा प्याक गरिएको फ्रुट जुसलाई खासै स्व’स्थकर मानिदैन । यसले स्वा’स्थ्यलाई खासै फाइदा पनि गर्दैन ।
किनकी यस्ता फलफूल एक वर्षसम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा यसमा रहेका सम्पूर्ण पो’षक तत्व न’ष्ट हुने गर्छ । त्यस्तै पो’लुटिन नामक तत्वको प्रयोग गरिएको फ्रु’ट जुसले यही संकेत गर्छ कि यसमा प्रयोग गरिएका फलफूल न्युन गु’णस्तरको छ । त्यतिमात्र हैन, यस्ता जुसमा कृतिम स्वाद र गुलियोको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा यो खाँदा मिठो भएपनि स्वा’स्थ्यका लागि यस्ता जुस खासै राम्रो मानिदैन ।
यस्ता जुसमा क्या’लोरीको मात्रा पनि धेरै हुन्छ जसले गर्दा मानिसहरुमा मो’टोपनाको समस्या निम्तिने गर्छ । उदाहरणको लागि एक गि’लास ए’प्पल जुसमा १२० क्या’लोरी हुन्छ । जबकी एउटा स्या’उमा क्या’लोरीको मात्रा ७८ हुने गर्छ । यसबाहेक पनि, प्याक गरिएको फ्रु’ट जुसको खानुका यस्ता धेरै बेफाइदा छन्, जसको बारेमा जानिराख्न हाम्रो लागि निकै जरुरी छ ।
फाइबर हुँदैन प्याक गरिएको फ्रु’ट जुस बनाउँदा विभिन्न प्रकारको फलफूलको रसलाई उमाल्ने गरिन्छ । ताकी त्यसमा रहेको व्या’क्टेरिया नष्ट होस् ।
यस क्रममा उक्त रसमा रहेको जरुरी भि’टामिन तथा प्रा’कृतिक तत्व पनि न’ष्ट हुने गर्छ । फेरी प्याक फ्रु’ट जुस तरल हुने भएकोले यसलाई प्याक गर्नु पूर्व नै यसमा रहेको गु’दी (फाइबर)लाई पहिले नै निकालिएको हुन्छ । जसले गर्दा यस्ता जुसले श’रीरलाई कुनै फाइदा गर्दैन । मो’टोपना बढाउँछ प्या’क गरिएको फ्रु’ट जुसमा चि’नीको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा गरिएको हुन्छ । यसले श’रीरमा क्या’लोरीको मात्रा बढाउँछ ।
त्यसैले, तौल कम गर्न चाहने व्यक्तिले फ्रु’ट जुसको से’वन गर्नबाट बच्नु पर्छ । वि’शेषज्ञहरुका अनुसार पनि प्राकृतिक फलफूल तथा सागसब्जीको तुलनामा प्याक गरिएको जूसको सेवनले मो’टोपनाको सम’स्या निम्तिने गर्छ । कृ’तिम रङ्गको प्रयोग प्रा’कृतिक फलफूलमा कृ’तिम रं’ग प्रयोग हुँदैन ।
जबकी कृ’तिम जुसमा कृ’तिक र’ङ्गको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता जुस प्रा’कृतिक देखिने गर्छ । यस्ता कृ’तिम र’ङ्गको सेवन श’रीरका लागि हा’निकारक हुन्छ ।
पे’ट सम्बन्धि स’मस्या कुनै कुनै फलफूलमा सौ’र्विटौल नामक चिनी पाइन्छ । सजिलै नपच्ने यस्ता चि’नीको से’वनले पे’ट सम्बन्धि विभिन्न स’मस्या निम्तिने गर्छ । ना’शपाती, स्वीट चे’री तथा स्याउ जस्ता फलफूलमा यस्तै चिनी रहेको हुन्छ । परिणामस्वरुप, यस्ता फलयुक्त फ्रु’ट जुसको से’वनले ग्या’स, पे’ट ग’डबडी, डा’यरिया जस्ता स’मस्या देखिने गर्छ । विशेषगरी, बालबालिकालाई यस्तो जुस पचाउन निकै कठिनाई हुन्छ ।
म’धुमेहका वि’रामीका लागि हा’नीकारक म’धुमेहका विरा’मीहरुले प्या’क जुस कुनै पनि हा’लतमा सेवन गर्नुहुँदैन । किनकी यस्ता जु’स रि’फाइन्ड गरिएको चि’नीबाट तयार पारिन्छ ।यदी यस्ता जुसमा सु’गर पि|m लेखिएको छ भने पनि म’धुमेहका विरामीले यस्ता जुस से’वन गर्नबाट बच्नु पर्छ । गु’लियो फलफूल, गाँजर, चु’कन्दर जस्ता उच्च चि’नीयुक्त फलफूल तथा सा’गसब्जीबाट बनेको जूसले र’गतमा चिनीको स्तर बढाउने गर्छ ।
अनियमित व्ल’ड शु’गर प्याक गरिएको फलफूलको जुसमा फलफूलको ब्रोका हुँदैन । जसले गर्दा श’रीरले प्रा’कृतिक फा’इबर पाउँदैन । सिङ्गो फलफूल तथा सागसब्जीलाई पचाउनमा श’रीरलाई जति समय लाग्ने गर्छ, कृतिक खा’द्य पदा’र्थद्धरा तयार पारिएको प्याक जुसलाई पचाउन श’रीरलाई उति नै कम समय लाग्दछ । त्यसैले त, यसको से’वनले श’रीरमा व्ल’ड शु’गरको मात्रा पनि तुरुन्तै बढ्ने गर्छ ।
रु’घा खो’कीको औ’षधि घरकै भा’न्सामा सहजै उपलब्ध हुन्छ। यसरी प्र’योग गर्नुहोस्
अहिले रु’घाखोकी लाग्नसाथ धेरैको मनमा आ’शंका पैदा हुन्छ, कतै को’रोनाको कारण त होइन ।
छा’तीमा क’फ ज’मेको छ ? यस्तो छ घरेलु उ’पचार
अहिले स्वा’स्थ्यमा कुनै स’मस्या देखिए धेरैलाई चि’न्ता हुन्छ, को’रोना त होइन । तर, मौ’सम बद्लिने यो समयमा सामन्य स्वा’स्थ्य स’मस्या देखापर्छ ।
२४ घन्टामा ४४ सय ९९ जनामा कोरोना संक्रमण, १७ को मृ’त्यु
कविता - October 23, 2020 0
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमितको संख्या १ लाख ५३ हजार ८ पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ४४ सय ९९ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख ५३ हजार ८ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।